CNC ခုံပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု servo feed ကိုစနစ်ကပြဿနာ - တရုတ် Changzhou Zhanhang အင်တာနေရှင်နယ်
CNC ခုံပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု servo feed ကိုစနစ်ကပြဿနာ
ယင်းအစာကျွေးခြင်းရွေ့လျားမှုဆော့ဖ်ဝဲသို့မဟုတ်ကန့်သတ် switch ကိုဆုံးဖြတ်ဟာ့ဒ်ဝဲန့်သတ်ချက်အားဖြင့်သတ်မှတ်ထားဆော့ဖ်ဝဲန့်သတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်သည့်အခါတစ်ဦး overtravel နှိုးဆော်သံပေါ်ပေါက်လိမ့်မယ်, နှင့်နှိုးဆော်သံအကြောင်းအရာ CRT အပေါ်ပြသပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါ CNC system ကိုကို manual အရ, အမှားဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ overtravel ရုတ်သိမ်းပေးရန်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သော feed ကိုကွင်းဆက်၏ဆင်းရဲသားကိုချောဆီအရည်ကြည်ခြင်း, servo စနစ်၏အနိမ့်အမြတ်နှင့်အလွန်အကျွံဝန်အဖြစ်အချက်တွေကြောင့်။ အထူးသဖြင့်, servo နှင့်ဘောလုံးကိုဝက်အူဆက်သွယ်မှုများအတွက်နားချင်းဆက်မှီလှည့်ဖို့ဘောလုံးကိုဝက်အူသို့မဟုတ်ကြောင့်မြည်းကြိုးကိုဖြည်ကွန်နက်ရှင်သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောဒါကိုတော့အဖြစ်နားချင်းဆက်မှီသူ့ဟာသူများ၏ချို့ယွင်းချက်မှ unsynchronized ခံရဖို့ servo လည်ပတ်ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ပုတ်ဖြစ်စေတဲ့, အစာရှောင်ခြင်းနှင့်နှေးကွေးသော။
နို့တိုက်ကျွေးနေစဉ်အတွင်းရုတ်တရက်တဲ့ဖြစ်ရပ်ဆန်းရှိပါသည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းရင်းများဖြစ်ကြသည်: 1. အဆိုပါ terminal ကိုထိုကဲ့သို့သောချောင် screw နှစ်ခုဆင်းရဲသောသူကဲ့သို့အဆက်အသွယ်အတွက်ဖြစ်၏ 2. အဆိုပါအနေအထားထိန်းချုပ်မှုအချက်ပြမှုနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပါတယ်; 3. အဆိုပါမြန်နှုန်းတိုင်းတာခြင်း signal ကိုထိုကဲ့သို့သောအမြန်နှုန်းတိုင်းစက်ကိုပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်မြန်နှုန်းတုံ့ပြန်ချက်အဖြစ်မတည်မငြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ signal ဝင်ရောက်စွက်ဖက်, စတာတွေဟာလှိုင်းလေထန်သည့်ရှေ့ဆက်၏ယခုအချိန်တွင်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုများကို reverse ပါကယေဘုယျအားဖြင့်အစာကျွေးရထားများ၏တန်ပြန်သို့မဟုတ်ကြီးမားလွန်းဖြစ်ခြင်းဟာ servo စနစ်ကအမြတ်အားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ယင်းအစာကျွေးခြင်းရွေ့လျားမှု၏ဝန်ကြီးလွန်းနေသည်သောအခါ, parameter သည် setting ကို, အမကြာခဏအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောလှုပ်ရှားမှုများကိုမှားယွင်းနေသည်ကို၎င်း, အစာကျွေးခြင်းဂီယာကွင်းဆက်၏ချောဆီအရည်ကြည်အခွအေနေသူတို့သည်ဆင်းရဲသားဖြစ်ကြ၏အဆိုပါ Overload အမှားဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မည်။ ဒါဟာအမှားများသောအားဖြင့်စက်သူ့ဟာသူရောဂါနှင့် CRT display ကိုတခုတခုအပေါ်မှာ Overload, overheat သို့မဟုတ် overcurrent နှိုးဆော်သံကိုပြသနေသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, အစာကျွေးခြင်း servo module တစ်ခုရက်နေ့တွင်, ညွှန်ပြချက်အလင်းသို့မဟုတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပြွန်ထိုကဲ့သို့သော Overload အဖြစ်နှင့် drive ကိုယူနစ်များ၏လက်ရှိကျော်နှိုးဆော်သံသတင်းအချက်အလက်များဖော်ပြရန်အသုံးပြုသည်။
1.5 Servo motor ကိုဖွင့်မထားဘူး
ဒါဟာအမှားအမြန်နှုန်း, အနေအထားထိန်းချုပ်မှု signal ကို output ကို, သို့မဟုတ် enable signal ကိုမဖြစ်သည့်အခါဖြစ်ပေါ်စေ (ဆိုလိုသည်မှာယင်း servo signal ကို, ပုံမှန်အားဖြင့်, DC + 24V relay ကိုကွိုင်ဗို့အားကို enable) ကိုဖွင့်နှင့်အစာကျွေးခြင်း drive ကိုယူနစ်ပျက်ယွင်းနေဖြစ်ပါတယ်မပြုပါ။ ဤအချိန်တွင်ကြောင့်, ထိုဂဏန်းကိုထိန်းချုပ် device ကိုပုံမှန်၏ command ကို output ကို terminal ကို၏အချက်ပြခြင်း, CRT မှတဆင့် I / O status ကိုစောငျ့ရှောကျရှိမရှိတိုင်းတာသည့် PLC လှေကားပုံ (သို့မဟုတ်စီးဆင်းမှုဇယား) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်လိုအပ်ပါသည်စက်ကိရိယာမှ ယင်းအစာကျွေးဝင်ရိုး၏စတင်ခွအေနအေဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်ချောဆီအရည်ကြည်ရှိမရှိ, အအေး, etc ကျေနပ်မှုကိုစောင့်ရှောက်မည်။ ယင်းအစာကျွေးခြင်း drive ကိုယူနစ်ပျက်ကွက်လျှင်, လဲလှယ်နည်းလမ်းသက်ဆိုင်ရာယူနစ်ပျက်ယွင်းနေရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
servo feed ကိုစနစ်ဘုံအမှား2ပုံမှန်ကိစ္စတွင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
(1) FANUC 7M စနစ်တပ်ဆင်ထားတစ်ဦးကစက်စင်တာ, အနို့တိုက်ကျွေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းအဆိုပါ Y-ဝင်ရိုးတုန်ခါမှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။
ယင်းပြတ်ရွေ့၏အကြောင်းရင်းဆုံးဖြတ်ရန်အလို့ငှာ, စက်လည်ပတ် mode ကိုလက်စွဲ mode မှာထားကြလေ၏, ထို Y ကို-ဝင်ရိုး feed ကိုလက်တော်သွေးခုန်နှုန်းမီးစက်ကထိန်းချုပ်ထားခဲ့ပါတယ်, ထိုသို့ Y ကို-ဝင်ရိုးနေဆဲတုန်ခါမှုရှိခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ဒီ mode မှာ, လှုပ်ရှားမှု၏အချိန်ကြာမြင့်စွာပြီးနောက်, Y ကို-ဝင်ရိုးမြန်နှုန်းယူနစ်ပေါ် OVC နှိုးဆော်သံအလင်းကိုလင်း။ ဒါဟာ Over-လက်ရှိနှိုးဆော်သံအဆိုပါ Y-ဝင်ရိုး servo drive ကိုအတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်မူကြောင်းကိုသက်သေပြနေသည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းအထက်ဖြစ်ရပ်ဆန်းအရ, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်ဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းရင်းများဖြစ်ကြသည်:
1 မော်တာ Overload လည်းမိုးသည်းထန်စွာဖြစ်၏2စက်မှုဂီယာစနစ်အညံ့ဖျင်း;3အနေအထားကွင်းဆက်အမြတ်လည်းမြင့်မားသည်,4servo motor ကိုဒါပေါ်မှာမကောင်းတဲ့ဖြစ်တယ်, ။
အဆိုပါပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းလမ်းအမှား၏အကြောင်းရင်းမှာ DC က servo motor ကိုပေါ်ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ရန်ဖလှယ်မှုနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုသည်။ အဆိုပါ Y-ဝင်ရိုးမော်တာဖယ်ရှားခဲ့သည်သောအခါ, နှစ်ခုစုတ်တံတ armature လက်ရှိသည်ညီမျှမှုဖြစ်ဖို့နဲ့မော်တာ output ကို torque သည်ညီမျှမှုဖြစ်စေ, လွခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကြောင့်ဖြင့် -axis ၏တုန်ခါမှုနှင့် overcurrent ဖြစ်စေတဲ့, ထိုမော်တာ၏ဖြစ်စေသောစပါးလည်းပျက်စီးခဲ့ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ယင်းမော်တာဝက်ဝံနှင့်စုတ်တံကိုအစားထိုးပြီးနောက်, စက်ကပုံမှန်ပြန်။
(2) FANUC 6ME စနစ်ကထောက်ပံ့တစ်ဦးကစက်စင်တာ။ ယင်းဝင်ရိုး၏မြန်နှုန်းလှုပ်ရှားမှုကာလအတွင်းမတည်မငြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမှတ်တိုင်မှလှုပ်ရှားမှုကာလအတွင်းကြီးမားတဲ့လွှဲခွင်လှိုဟာရပ်တန့်အနေအထားမှာဖြစ်ပေါ်ခြင်း, တစ်ခါတစ်ရံ positioning ကိုအပြီးသတ်မရနိုငျနှင့်နောက်တဖန် operated နိုင်ပါတယ်ရှေ့တော်၌ထိုစက်ကိုပိတ်ထားရမည်ဖြစ်သည်။
analysis နှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့: စက်ကိရိယာတခု၏တုန်ခါမှု၏ဂရုစိုက်လေ့လာရေး, X-ဝင်ရိုးလှိုကြိမ်နှုန်းနိမ့်သည် ဖြစ်. , အဘယ်သူမျှမပုံမှန်မဟုတ်သောအသံသည်ရှိကွောငျးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ လှိုဖြစ်ရပ်ဆန်း၏ရှုထောင့်ကနေ, ထိုအမှားဖြစ်ရပ်ဆန်းထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်တံခါးပိတ်-ကွင်းဆက်စနစ်၏ parameter သည် setting ကိုမှ related ဖြစ်ပါတယ်: စနစ်အမြတ် setting ကိုလည်းမြင့်မားသည်နှင့်, အဓိကကျတဲ့ကဏ္ဍအချိန်အဆက်မပြတ်ကြီးမားလွန်းသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါစစ်ဆေးမှုစနစ်၏ parameter သည် setting ကို, အ servo drive ကို၏အမြတ်တို့နှင့်အဓိကကျတဲ့ကဏ္ဍအချိန် potentiometer များ၏ညှိနှိုင်းမှုအပေါငျးတို့သညျသငျ့လျြောအကွာအဝေးတွင်ရှိနှင့်အမှားရှေ့တော်၌ထိုညှိနှိုင်းမှုနှင့်အတူလုံးဝကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့် preliminarily ယင်းရိုးတံ၏လှိုဘောင်၏ setting ကိုများနှင့်ညှိနှိုင်းမှု၏လွတ်လပ်သောကြောင်းစီရင်ခြင်းကိုခံရနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်အတည်ပြုရန်နိုင်ဖို့အတွက်အထက်ပါ parameters တွေကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနေစဉ်အတွင်းမူရင်းညှိနှိုင်းမှုတန်ဖိုးကိုမှတ်တမ်းတင်၏အဓိကအကြောင်းရင်းအောက်မှာ re-ချိန်ညှိခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ပြီး ရှိ. , ကအမှားနေဆဲတည်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်, ထိုတရားမှန်ကန်မှုသက်သေပြရာ။